XOG: Sababaha Ismaaciil Madar looga soo saarey Tartanka Qur'aanka Dubai
DUBAI, UAE- Warsidaha Garowe Online, ayaa u kuurgalay sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya in Ismaaciil Cumar Madaar laga soo saaro Tartankii Qur'aanka ee magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
GO ayaa ogaaday in Ismaaciil Madaar, oo Somalia u Matalay Tartanka laga soo saarey Imaaraadka, kadib markii uu Baraha Bulshada "Social Media", la wadaagay asxaabtiisa Qoraallo ay ku taageerayeen Qadar.
UAE ayaa soo saartey dhawaan ammaro cusub, oo kamid ah in cid kasta oo taageero iyo midnimo ugu muujisa Baraha Bulshada dalka Qadar ku mutaysan doono 15 sano oo xabi ah, iyo ganaax lacageed.
Arinta Ismaaciil ayaa noqotay mid hadal-heyn badan, oo qabsatay Canaawiinta Warbaahinta qaar, oo u micneeyay Kiiskiisa mid la xiriira go'aankii dowladda Somalia ka qaadatey Khilaafka Khaliijka ka taagan.
Isagoo kula hadlayay Wariyaasha magaalada Hargeysa, ayuu sheegay Ismaaciil Madaar in amarka looga soo saarey Imaaraadka uu ka dambeeyay Wafdigii ka socday Qadar ee tagey Muqdishu todbaadkan.
Dhanka kale, Hay'adda agaasintay Tartanka Qur'aan Akhriska ee Imaaraadka, ayaa cadaysay in sabab diblomaasiyadeed aan Ismaaciil looga soo saarin dalkaasi, balse ay tahay mid shaqsiyadeed.
Haddii kiiska uu yahay mid Imaaraadka xiriir ugu jarayso Somalia ay jiraan siyaabo kale oo ay ku muujin karaan arintaasi, sida in dhamaan Soomaalida ku nool inay ku amarto in dalkeeda isaga baxaan.
Dalka Somalia waxaa Imaaraadka Carabta, kala dhaxeeya Xiriir qoto dheer oo Taariikhi ah, mana jirto hadda wax saameyn ah oo uu ku yeeshay Khilaafka u dhaxeeya Wadamada Khilaajka qaar iyo Qadar.
GAROWE, Puntland- Waxaa maanta 18 June 2017 lagusoo afmeeray masaajidka Al Huda ee magaalada Garowe, loollan loo qabtay Arday kasocotay 16 degmo oo katirsan Puntland, kuwaasoo ku tartamayay Soddonka Juz ee Qur’aanka Kariimka.
Madaxweynaha Dawladda ...
​WARBIXIN: Xaalad adag oo soo wajahday qoysas u hayaamay gobolka Karkaar [Sawirro]
Puntland 08.01.2017. 13:22
Tartanka Horyaalka kooxaha heerka kowaad ee Puntland oo bilaaban doona
Puntland 03.01.2017. 22:04
​Puntland oo ka hadashay diidmada Culimada ee tartanka Garowe ka furmay
Puntland 22.12.2016. 22:52
​Tartan Qur'aanka ah oo Garowe lagu soo xiray
Puntland 28.06.2016. 17:25